क्लिनिकल ट्रायल के हो ? थर्ड फेजको ट्रायल गर्दा मानव स्वास्थ्यमा कत्तिको खतरा हुन्छ ? | Nepali Health
क्लिनिकल ट्रायल के हो ? थर्ड फेजको ट्रायल गर्दा मानव स्वास्थ्यमा कत्तिको खतरा हुन्छ ?
२०७७ भदौ २२ गते १६:०८ मा प्रकाशित
कोभिड -१९ को महामारीसंगै यसमा प्रयोग हुने औषधिको क्लिनिक ट्रायलको व्यापक चर्चा छ । नेपाल अहिले कोभिड विरुद्ध प्रभावकारी मानिएको भनिएको रेमडेसिभिर औषधिको फेज थ्री कै क्लिनिकल ट्रायल हुँदैछ । त्यसको संयोजन नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गर्दैछ । तर सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले क्लिनिकल ट्रायल गर्दा मानव स्वास्थ्यका लागि असुरक्षित हुने कुरा समेत व्यक्त गरेका छन् । यसपटक हामीले औषधि विज्ञ समेत रहेका नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा प्रदीप ज्ञवालीसंग यसको जवाफ खोज्दैछौँ ।
डा. प्रदीप ज्ञवाली
क्लिनिक ट्रायल गर्नु अघि प्रि क्लिनिकल स्टडी भन्ने हुन्छ । यसमा औषधिहरुको डोजिङ र औषधिले पार्न सक्ने साइड इफेक्ट लगायतका खराव असरहरुका बारेमा प्रयोगशालामा लगेर विस्तृत अध्ययन गरिन्छ ।
त्यसबाट औषधिको मोलिक्युल पत्ता लगाइन्छ । प्रयोगशालाबाट मोलिक्युल पत्ता लागिसकेपछि त्यसले के के कामहरु गर्छ ? डोज कसरी दिने ? कति समयमा दिने भन्ने कुराहरु तयार गरिन्छ र प्रि क्लिनिकल अध्ययन सकिन्छ । तर यो अध्ययन् पुरा गर्न बर्षौ लाग्न सक्छ ।
त्यसपछि मात्रै त्यो मोलिक्युल क्लिनिकल ट्रायलका लागि तयार हुन्छ । क्लिनिकल ट्रायल चार चरणमा गरिन्छ । पहिलो दोस्रो तेस्रो र चौथो चरण । क्लिनिकल ट्रायलमा त्यो मोलिक्युल मानव शरीरमै ट्रायल गरिन्छ ।
कसरी गरिन्छ क्लिनिकल ट्रायल ?
पहिलो र दोस्रो चरणमा थोरै भन्दा थोरै भोलेन्टियरमा परीक्षण गरिन्छ । औषधि हो भने बिरामीमा परीक्षण गरिन्छ । खोप हो भने स्वस्थ व्यक्तिमा परीक्षण गरिन्छ । त्यसलाई स्टडी पार्टिसिपेन्ट भनिन्छ ।
पार्टिसिपेन्टलाई कति मात्रामा कहाँ कुन समयमा कसरी गर्ने ? यसको असरहरु के के हुनसक्छ अर्थात यसका नराम्रा र राम्रा असरहरु सबै जानकारी गराएर व्यक्तिसंग इन्फर्म कन्सर्न लिनुपर्छ । अर्थात यसमा सहभागिता जनाउने व्यक्तिलाई पहिल्यै सबैकुरा थाह दिनु पर्छ । उसको राजी खुशीबाट औषधिको त्यो मोलिक्युल ट्रायल गरिन्छ ।
फस्ट्रफेज अर्थात पहिलो चरणको ट्रायलमा हामीले के हेर्छौ भने त्यो औषधि कति सेफ्टी अर्थात कति सुरक्षीत छ भन्ने हेरिन्छ । तर यो थोरै जनसंख्यामा दिइन्छ । अर्थात यो चरणमा पार्टिसिपेन्टहरु १०० जना भन्दा कम हुन्छन् ।
त्यसमा मुख्य गरी कति सुरक्षित छ भन्ने हेरिन्छ । वा कति असर गर्छ भन्ने हेरिन्छ । सेफ्टीसंगै इफिकेसी पनि हेरिन्छ ।
यसलाई औषधि परीक्षणमा भ¥याङ चड्ने पहिलो खुड्किलो हो भनेर जान्दा हुन्छ । त्यसमा सोचे जस्तो नतिजा आएन अर्थात सुरक्षित देखिएन भने त्यो औषधिको ट्रायल त्यहि रोकिन्छ । त्यहिबाट आउट हुन्छ । औषधि तथा खोपका धेरैजसो अध्ययन्हरु पहिलो चरणमै आउट हुन्छ ।
सेकेण्ड फेज अर्थात दोस्रो चरणमा फार्माको डायनामिक्स, इफिकेसी हेरिन्छ । औषधिले कति काम गरेको छ भनेर हेरिन्छ । तोकिए अनुसार कति प्रभावकारी छ भन्ने पनि हेरिन्छ । कति लक्षण घटायो ? कति एन्टीबडी बनायो भन्ने हेरिन्छ । पहिलो र दोस्रो फेजमा सेफ्टी र इफिक्यासी हेरेपछि सम्वन्धित ठाँउमा रजिष्ट्रेसन हुन्छ । राष्ट्रिय संस्था छन् भने त्यहाँ रजिष्ट्रेसन हुन्छ । अथवा अहिले विश्वले मानेको अमेरिकन संस्था युएस एफडीए हो, त्यहाँ दर्ता हुन्छ ।
पहिलो र दोस्रोमा राम्रो छ र सुरक्षित छ भन्ने प्रमाणित भएपछि तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने हो । त्यसलाई मल्टिसेन्ट्रिक मल्टिनेशनल ट्रायल भनिन्छ । यसमा हजारौँ मानिसमा यो औषधि दिइन्छ । विभिन्न देशका जनतालाई दिइन्छ । सुरक्षा र प्रभावकारिताको अझ एडभान्स रुपमा परीक्षण गरिन्छ । पहिले सानो सानो संख्यामा परीक्षण गरियो तर अहिले अब बृहत रुपमा यसको परीक्षण गरिन्छ ।
मानिसको जीनको आधारमा पनि औषधिले काम गर्ने नगर्ने हुनसक्छ । ती सबैकुराहरु यो फेजको ट्रायलमा हेरिन्छ । जस्तै : अहिले चाइनाले बनाएको खोप नेपालीका लागि नमिल्न पनि सक्छ । भारतीयमा नमिल्न पनि सक्छ । वा मिल्न पनि सक्छ । त्यहि हेर्ने हो । फेज थ्रिमा । रियर भन्दा रियर इफेक्टहरु यस चरणमा निस्कन्छ । यद्धपी यो चरणको परीक्षण सुरक्षित हुन्छ । यो चरण पार गरेपछि परीक्षण गरिएका सबै ठाँउको रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै यो औषधि ठिक छ भन्ने चरणमा पुगिन्छ । त्यसपछि तेस्रो चरण पुरा हुन्छ । र औषधिको लाइसेन्स पाउँछ । त्यसपछि औषधि बजारमा आउँछ । चौथो चरणमा औषधि बजारमा आउँदै गर्दा हामीले त्यसलाई पोष्ट मार्केटिङ सर्भे गर्नेछौँ ।
उसो भए अहिले नेपालमा आएको कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिर सुरक्षित हो ?
विश्वमा अहिले ६ वटा कम्पनीको औषधिहरु तेस्रो चरणको परीक्षणमा छन् । त्यसमध्ये रेमडिसिभिर पनि हो । पहिलो र दोस्रो चरण पार गरेर आएको औषधि हो । यो एकदमै सुरक्षित छ । हामीले यसलाई ल्याउनु अघि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बैज्ञानिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभागका सबै प्रतिनिधि बसेर छलफल गरी कोरोना विरुद्धको औषधिको रुपमा ट्रायल गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।
कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपहरु पनि नेपालमा ट्रायलका लागि आएको छ होइन ? हो चाइनाको साइनो भ्याक बायोटेक आएको छ , यहाँ हुंसि सिमेन्टमा काम गर्ने ५०० जना चाइनीजका लागि यो परीक्षण गर्न भनेर आएको छ । नेपाली र चाइनीज इच्छुकहरुलाई परीक्षणमा सहभागी बनाउने भन्ने हाम्रो योजना हो । एक हजार भाइल आउँछ । त्यो पाँच सय जनामा परीक्षण गर्ने हो । रसियाले पनि इच्छा देखाएको छ । अर्को अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले पनि इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
हामीले विस्तारै यी अनुरोधहरुलाई स्वीकारेर ट्रायलमा सहभागी हुने तयारीमा छौँ ।
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशकबाट डा. ज्ञवाली हटाइए
औषधि व्यवस्था विभागले दियो मोडर्ना खोपलाई आपतकालीन प्रयोग अनुमति
पाल्पा अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द
देशभर थपिए ९७९ जना कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या ४७ हजार २३६